Karate – « Gasshuku »: nahasarika mpikatroka maro | NewsMada
Karate – « Gasshuku »: nahasarika mpikatroka maro
Tanteraka ny fanamby ! Tontosa, ny asabotsy lasa teo teny amin’ny Akany Nomenjanahary Ambohimarina, ny fampiofanana mahakasika ny « wado ryu » nampitondraina ny anarana hoe “Gasshuku”. Fifampizarana niarahana tamin’ny sensei Rajaonarison Allain, mpikatroka manana grady ambony sy efa manana traikefa amin’ity taranja ity.
Maro ny mpikatroka voasarika tamin’ity fifampizarana ity. Olon-dehibe miisa 75 sy ankizy 46 no tonga teny an-toerana nandray ny fampianarana avy amin-dRajaonarison Allain. Hita ho nahaliana tokoa ny teknika sy traikefa natolotry ny mpampiofana raha jerena ny fahavitrihan’ny mpikatroka. Nanampy azy ireo hanatsara ny fahaiza-manaony tsirairay avy eo amin’ny karate malagasy ny fampianarana nampitaina.
Feno ny fandaharam-potoana nandritra izao fandalovan-dRajaonarison Allain izao. Nifampizarana ny karazana teknika maro toy ny “tai sabaki”, ny “renzoku waza”, ny “goshin ho”, ny “kata superieurs”, ny “kaisetsu”. Maniry ny hisian’ny toy izao matetitetika ireo karateka alagasy tonga namaly ny antso.
Tsara ny manamarika fa na ny tany amin’ny faritra aza, tonga maro ihany koa nanatrika ny fampiofanana. Anisan’izany ny tany amin’ny faritra Vakinankaratra, ny faritra Boeny, ny faritra Atsinanana, ny faritra Analanjirofo, ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny faritra Matsiatra Ambony. Tsy ambakan’izay ihany koa anefa ny teto amin’ny faritra Analamanga izay nahatonga solontena betsaka indrindra.